Zootopia (2016) – M-Sub Movie – Myanmar Subtitle Movies & Series Free Download Website
PG 2016 108 min Animation
ကမ်ဘာကွီးပျေါမှာ လူသားတှဆေိုတာလုံးဝမရှိပဲ တိရိစ်ဆာနျတှသောရှိပါတယျ။ တိရိစ်ဆာနျတှမှော Predator (မုဆိုး) နဲ့ Prey (သားကောငျ) ဆိုပွီး အခွခေံအမြိုးအစားနှဈခုခှဲခွားထားပါတယျ။ ဥပမာအနနေဲ့ပွောရရငျ ခွင်ျသေ့၊ ကြား၊ မွခှေေးတှကေ မုဆိုးတှဖွေဈပွီး သိုး၊ သမငျ၊ ယုနျ စတဲ့ တိရိစ်ဆာနျလေးတှကေတော့ သားကောငျတှပေေါ့။ မုဆိုးနဲ့သားကောငျဆိုပမေယျ့ မုဆိုးကို သားကောငျက ကွောကျလနျ့နစေရာမလိုပဲ အတူယှဉျတှဲနထေိုငျနကွေတာပါ။ ဟိုးအရငျအတိတျအခြိနျတှကေ Predator (မုဆိုး) တှဟောရကျစကျကွမျးကွုတျပွီး အရိုငျးအစိုငျးသတ်တဝါတှအေဖွဈ Prey (သားကောငျ) တှကေို ရနျပွုတိုကျခိုကျသတျဖွတျခဲ့ပမေယျ့ အခုအခါမှာတော့ တိရိစ်ဆာနျလေးတှအေားလုံးဟာ ခဈြခငျစှာနထေိုငျနကွေပွီဖွဈပါတယျ။
သာမနျမွို့ငယျလေးတဈမွို့မှ ယုနျမလေး Judy Hopps မှာ ငယျစဉျတညျးကကွီးမားတဲ့ အိပျမကျတဈခုရှိနပေါတယျ။ ဒါကတော့ ခတျေမီစှာ စနဈတကလြညျပတျနတေဲ့ မွို့ပွကွီး Zootopia မှာ ရဲအရာရှိတဈယောကျအဖွဈတာဝနျထမျးဆောငျခငျြတာပါ။ ဒါကွောငျ့ Judy ဟာ Zootopia Police Academy မှာ ရဲအရာရှိသငျတနျးကို အောငျမွငျအောငျတကျရောကျခဲ့ပါတယျ။ ပုံမှနျအားဖွငျ့ အရှယျအစားသေးငယျတဲ့အပွငျ အသညျးငယျတတျတဲ့ ယုနျလေးတှကေို ရဲအရာရှိအဖွဈ ခနျ့အပျဖို့ဆိုတာ ဘယျလိုမှ မဖွဈနိုငျပါဘူး။ ဒါပမေယျ့ Judy ရဲ့ သှကျလကျတကျကွှပွီး ဖွတျထိုးဉာဏျကောငျးမှုတှကွေောငျ့ သူမဟာ Zootopia ရဲ့ ပထမဆုံး ရဲအရာရှိ ယုနျမလေးဖွဈလာခဲ့ပါတယျ။
ဒါပမေယျ့ ရဲအုပျကွီး Bogo ကတော့ Judy ကို အထငျမကွီးပါဘူး။ ပထမဆုံးရတဲ့ Judy အတှကျ တာဝနျကတော့ Parking Duty ပါတဲ့။ အမှုအကွီးကွီးတှကေို စုံစမျးဖွရှေငျးခငျြတဲ့ Judy အနနေဲ့ ရပျနားခြိနျကြျောလှနျတဲ့ ကားတှကေို ခလြနျလိုကျတပျရတာကတော့ တကယျ့ကို မှနျးခကျြနဲ့ နှမျးထှကျမကိုကျတဲ့ တာဝနျပါပဲ။ ဒါပမေယျ့ သူမ အကောငျးဆုံး လုပျခဲ့တယျ။ နလေ့ညျမတိုငျခငျ ကားအစီးရေ ၂၀၀ အထိရအောငျ ခလြနျတပျနိုငျခဲ့တယျ။
Judy အလုပျလုပျရငျး အကူအညီပေးမိတဲ့ မွခှေေးလေး Nick Wilde ဟာ သူမထငျသလို တကယျဒုက်ခရောကျတာမဟုတျပဲ သူမကို တဈပတျရိုကျသှားတယျဆိုတာကို Judy သိလိုကျရတဲ့ အခါမှာတော့ ခံပွငျးပွီးဒေါသဖွဈခဲ့ရတယျ။ ယုံကွညျလို့မရတဲ့ မွခှေေးရဲ့ ပငျကိုယျစရိုကျကို ယုံကွညျမိတဲ့ သူမကိုယျသူမအပွဈတငျမိတယျ။
တဈနမှေ့တော့ ရဲအုပျကွီး Bogo ကိုအကူအညီလာတောငျးတဲ့ တိရိစ်ဆာနျပြောကျဆုံးမှုတဈခုကို Judy က သူမရှာပေးမယျဆိုပွီး အတငျးလကျခံလိုကျတယျ။ ရဲအုပျကွီး Bogo က Judy ကို အခြိနျနှဈရကျပေးပါတယျ။ နှဈရကျပွညျ့လို့မှ Judy အနနေဲ့ဒီအမှုကို အဖွရှေငျးနိုငျဘူးဆိုရငျ အလုပျကထုတျပယျခံရတော့မှာပါ။
Judy တဈယောကျသဲလှနျစတှလေိုကျရှာရငျး မွခှေေးလေး Nick Wilde က သူ့ကိုကူညီပေးနိုငျမယျဆိုတာ သိလိုကျပါတယျ။ တကယျတမျးစုံစမျးလိုကျတဲ့ အခါမှာတော့ ဒီတိရိစ်ဆာနျ ၁၄ ကောငျပြောကျဆုံးနမှေုဟာ သာမနျထကျပိုမိုရှုပျထှေးပွီး Zootopia မွို့ကွီးက တိရိစ်ဆာနျတှအေားလုံးရဲ့ အေးခမျြးစှာယှဉျတှဲနထေိုငျမှုကိုပါ ထိခိုကျလာတဲ့အခါမှာတော့ …. ။
ကမ္ဘာကြီးပေါ်မှာ လူသားတွေဆိုတာလုံးဝမရှိပဲ တိရိစ္ဆာန်တွေသာရှိပါတယ်။ တိရိစ္ဆာန်တွေမှာ Predator (မုဆိုး) နဲ့ Prey (သားကောင်) ဆိုပြီး အခြေခံအမျိုးအစားနှစ်ခုခွဲခြားထားပါတယ်။ ဥပမာအနေနဲ့ပြောရရင် ခြင်္သေ့၊ ကျား၊ မြေခွေးတွေက မုဆိုးတွေဖြစ်ပြီး သိုး၊ သမင်၊ ယုန် စတဲ့ တိရိစ္ဆာန်လေးတွေကတော့ သားကောင်တွေပေါ့။ မုဆိုးနဲ့သားကောင်ဆိုပေမယ့် မုဆိုးကို သားကောင်က ကြောက်လန့်နေစရာမလိုပဲ အတူယှဉ်တွဲနေထိုင်နေကြတာပါ။ ဟိုးအရင်အတိတ်အချိန်တွေက Predator (မုဆိုး) တွေဟာရက်စက်ကြမ်းကြုတ်ပြီး အရိုင်းအစိုင်းသတ္တဝါတွေအဖြစ် Prey (သားကောင်) တွေကို ရန်ပြုတိုက်ခိုက်သတ်ဖြတ်ခဲ့ပေမယ့် အခုအခါမှာတော့ တိရိစ္ဆာန်လေးတွေအားလုံးဟာ ချစ်ခင်စွာနေထိုင်နေကြပြီဖြစ်ပါတယ်။
သာမန်မြို့ငယ်လေးတစ်မြို့မှ ယုန်မလေး Judy Hopps မှာ ငယ်စဉ်တည်းကကြီးမားတဲ့ အိပ်မက်တစ်ခုရှိနေပါတယ်။ ဒါကတော့ ခေတ်မီစွာ စနစ်တကျလည်ပတ်နေတဲ့ မြို့ပြကြီး Zootopia မှာ ရဲအရာရှိတစ်ယောက်အဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ချင်တာပါ။ ဒါကြောင့် Judy ဟာ Zootopia Police Academy မှာ ရဲအရာရှိသင်တန်းကို အောင်မြင်အောင်တက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ ပုံမှန်အားဖြင့် အရွယ်အစားသေးငယ်တဲ့အပြင် အသည်းငယ်တတ်တဲ့ ယုန်လေးတွေကို ရဲအရာရှိအဖြစ် ခန့်အပ်ဖို့ဆိုတာ ဘယ်လိုမှ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် Judy ရဲ့ သွက်လက်တက်ကြွပြီး ဖြတ်ထိုးဉာဏ်ကောင်းမှုတွေကြောင့် သူမဟာ Zootopia ရဲ့ ပထမဆုံး ရဲအရာရှိ ယုန်မလေးဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ရဲအုပ်ကြီး Bogo ကတော့ Judy ကို အထင်မကြီးပါဘူး။ ပထမဆုံးရတဲ့ Judy အတွက် တာဝန်ကတော့ Parking Duty ပါတဲ့။ အမှုအကြီးကြီးတွေကို စုံစမ်းဖြေရှင်းချင်တဲ့ Judy အနေနဲ့ ရပ်နားချိန်ကျော်လွန်တဲ့ ကားတွေကို ချလန်လိုက်တပ်ရတာကတော့ တကယ့်ကို မှန်းချက်နဲ့ နှမ်းထွက်မကိုက်တဲ့ တာဝန်ပါပဲ။ ဒါပေမယ့် သူမ အကောင်းဆုံး လုပ်ခဲ့တယ်။ နေ့လည်မတိုင်ခင် ကားအစီးရေ ၂၀၀ အထိရအောင် ချလန်တပ်နိုင်ခဲ့တယ်။
Judy အလုပ်လုပ်ရင်း အကူအညီပေးမိတဲ့ မြေခွေးလေး Nick Wilde ဟာ သူမထင်သလို တကယ်ဒုက္ခရောက်တာမဟုတ်ပဲ သူမကို တစ်ပတ်ရိုက်သွားတယ်ဆိုတာကို Judy သိလိုက်ရတဲ့ အခါမှာတော့ ခံပြင်းပြီးဒေါသဖြစ်ခဲ့ရတယ်။ ယုံကြည်လို့မရတဲ့ မြေခွေးရဲ့ ပင်ကိုယ်စရိုက်ကို ယုံကြည်မိတဲ့ သူမကိုယ်သူမအပြစ်တင်မိတယ်။
တစ်နေ့မှတော့ ရဲအုပ်ကြီး Bogo ကိုအကူအညီလာတောင်းတဲ့ တိရိစ္ဆာန်ပျောက်ဆုံးမှုတစ်ခုကို Judy က သူမရှာပေးမယ်ဆိုပြီး အတင်းလက်ခံလိုက်တယ်။ ရဲအုပ်ကြီး Bogo က Judy ကို အချိန်နှစ်ရက်ပေးပါတယ်။ နှစ်ရက်ပြည့်လို့မှ Judy အနေနဲ့ဒီအမှုကို အဖြေရှင်းနိုင်ဘူးဆိုရင် အလုပ်ကထုတ်ပယ်ခံရတော့မှာပါ။
Judy တစ်ယောက်သဲလွန်စတွေလိုက်ရှာရင်း မြေခွေးလေး Nick Wilde က သူ့ကိုကူညီပေးနိုင်မယ်ဆိုတာ သိလိုက်ပါတယ်။ တကယ်တမ်းစုံစမ်းလိုက်တဲ့ အခါမှာတော့ ဒီတိရိစ္ဆာန် ၁၄ ကောင်ပျောက်ဆုံးနေမှုဟာ သာမန်ထက်ပိုမိုရှုပ်ထွေးပြီး Zootopia မြို့ကြီးက တိရိစ္ဆာန်တွေအားလုံးရဲ့ အေးချမ်းစွာယှဉ်တွဲနေထိုင်မှုကိုပါ ထိခိုက်လာတဲ့အခါမှာတော့ …. ။
Option 1 server.mfile.cloud 1.2 GB HD (1080p)
Option2yuudrive.me 1.2 GB HD (1080p)
Option3sharer.pw 1.2 GB HD (1080p)
Option4server.mfile.cloud3GB FHD (1080p) DTS 5.1
Option5storage.msubmovie.com3GB FHD (1080p) DTS 5.1
Option6yuudrive.me3GB FHD (1080p) DTS 5.1
Option7sharer.pw3GB FHD (1080p) DTS 5.1